Levitikosy 5 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
5 “‘Raha misy olona*+ manota satria nandre fanozonana+ ampahibemaso sady vavolombelon’ny fahotana iray, na nahita na nahalala momba izany, nefa tsy niteny,+ dia hampamoahina noho ny fahadisoany izy. 2 “‘Na, raha misy olona* mikasika zava-maloto, toy ny fatin’ny biby maloto, na bibidia izany, na biby fiompy, na bibikely,+ eny fa na tsy fantany aza izany,+ dia maloto ihany izy ka meloka.+ 3 Na, raha mikasika ny fahalotoan’olona izy, na inona na inona izany fahalotoany+ mety hampahaloto azy izany, eny fa na tsy fantany aza izany, nefa lasa fantany, dia meloka ihany izy. 4 “‘Na, raha misy olona* mianiana hanao ratsy+ na hanao soa ka manao teny tsy voahevitra,+ na inona na inona fianianana tsy voahevitra nataony,+ eny fa na tsy tsapany aza ny ho vokany, nefa lasa tsapany, dia meloka ny amin’ny iray amin’ireo fianianana ireo izy. 5 “‘Raha meloka ny amin’ny iray amin’ireo zavatra ireo izy, dia hiaiky+ ny fahotany. 6 Koa hitondra fanatitra noho ny heloka+ izy noho ny nanotany, ka ondrivavy kely na osivavy+ kely no hoentiny ho an’i Jehovah ho fanatitra noho ny ota. Ary ny mpisorona handrakotra ny fahotany.+ 7 “‘Fa raha tsy takatry ny volany ny ondry,+ dia domohina+ roa na zana-boromailala roa no hoentiny ho an’i Jehovah, ho fanatitra noho ny heloka, noho ny nanotany: Ny vorona iray ho fanatitra noho ny ota,+ ary ny iray ho fanatitra dorana. 8 Ary hoentiny any amin’ny mpisorona ireo, ka ilay fanatitra noho ny ota aloha no hatolony. Dia hotsongoiny+ ny eo anoloana amin’ny tendan’ilay vorona mba ho tataka, nefa tsy hotapahiny. 9 Ary haka amin’ny ran’ilay fanatitra noho ny ota izy, ka hafafiny eo amin’ny lafin’ny alitara, fa ny ambin-dra kosa havelany hitsika eo am-pototry ny alitara.+ Fanatitra noho ny ota izany. 10 Hatolony ho fanatitra dorana kosa ilay vorona anankiray, ka hataony araka ny efa fanao.+ Ary ny mpisorona handrakotra+ ny fahotany, ka havela ny helony.+ 11 “‘Raha mbola tsy takatry ny volany+ ny domohina roa na ny zana-boromailala roa, dia lafarinina tsara toto ampahafolon’ny efaha*+ no hoentiny ho fanatitra noho ny ota, noho izy nanota. Tsy hasiany menaka+ na ditin-kazo manitra eo amboniny, fa fanatitra noho ny ota+ izany. 12 Ary hoentiny any amin’ny mpisorona izany, ka hakan’ny mpisorona eran-tanan’ila ho fanatitra fampahatsiahivana,+ ary hodorany eo ambony alitara mba hidona-tsetroka eo ambony fanatitra atao anaty afo ho an’i Jehovah.+ Fanatitra noho ny ota+ izany. 13 Ary ny mpisorona handrakotra+ ny fahotan’ilay olona, noho izy nanao ny iray amin’ireo fahotana ireo, ka havela ny helony. Ary ho an’ny mpisorona+ ny ambin’ilay fanatitra, toy ny amin’ny fanatitra varimbazaha.’” 14 Ary hoy koa i Jehovah tamin’i Mosesy: 15 “Raha misy olona* tsy mendri-pitokisana ka manota tsy nahy amin’ny zava-masin’i Jehovah,+ dia hitondra ondrilahy tsy misy kilema ho an’i Jehovah izy, ho fanatitra noho ny heloka.+ Tokony ho sekely*+ volafotsy, araka ny sekelin’ny toerana masina, no hanombanana ny vidin’ilay ondry hatao fanatitra noho ny heloka. 16 Hanonitra ilay zavatra nalainy ilay olona nanota tamin’ny toerana masina, ary mbola hanampy ampahadiminy+ izy. Dia homeny an’ilay mpisorona izany mba handrakofany+ ny fahotan’ilay olona, amin’ny alalan’ilay ondrilahy atao fanatitra noho ny heloka, ary havela ny helony.+ 17 “Raha misy olona* manota, ka mandika ny iray amin’ireo zavatra andraran’i Jehovah, eny fa na tsy fantany aza izany,+ dia meloka ihany izy ka hampamoahina noho ny fahadisoany.+ 18 Hitondra ondrilahy tsy misy kilema any amin’ny mpisorona izy, ho fanatitra noho ny heloka.+ Ho araka izay tombam-bidy takin’ny mpisorona ny vidin’ilay ondry. Ary ny mpisorona handrakotra+ ny fahotan’ilay olona noho ny fahadisoana nataony tsy nahy, eny fa na tsy fantany aza izany, ka havela ny helony.+ 19 Fanatitra noho ny heloka izany. Tena meloka+ eo anatrehan’i Jehovah tokoa izy.”